Tom Hiddleston အနေနဲ့ Taylor Swift ကိုတွဲတာယခုအထိ ဘယ်လောက်ကုန်ကျသွားပြီလဲ??? - Myanmarload
Tom Hiddleston အနေနဲ့ Taylor Swift ကိုတွဲတာယခုအထိ ဘယ်လောက်ကုန်ကျသွားပြီလဲ???
လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ် က 18:47 August 24, 2016
ရုပ်ရှင်မင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ တကယ့်ကို အကျိုးရှိပြီး အမြတ် အများကြီးရမယ့် အခွင့်အရေးတွေအစား ရည်စားအသစ်လေး Taylor Swift နဲ့ချိန်းတွေ့ဖို့ အတွက် လဲလှည်ခဲ့ရတဲ့ Tom Hiddleston ဟာ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ထိတောင် ကုန်ကျပြီးသွားပြီလဲ ဆိုတာ သင်သိပါသလား?
Taylor Swift နဲ့ Tom Hiddleston ဟာဆိုရင်တွဲတာသိပ်မကြာသေးဘူးလို့ ပြောလို့ရပေမယ့် ယခုဆိုရင် Taylor ကြောင့် Tom ဟာ တော်တော်ကို အကုန်အကျများနေပါပြီ။
၁)ဒေါ်လာ ၃၉ မီလီလံ လောက်ရမဲ့ James Bond ဇာတ်ကောင်နေရာကို လျာထားခြင်းကိုလဲ Tom ဟာ လက်လွတ်သွားပါပြီ။ တကယ်ဆိုရင်သူဟာ Daniel Crag အတွက် Jame Bond နေရာကို အရနိုင်ဆုံးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
၂)Armani တံဆိပ်ကို ကြော်ငြာဖို့ အတွက် ၁၀ မီလီယံလောက်ရမယ့် အခွင့်အရေးလဲ မရှိတော့ပါဘူး။ Taylor Swift ရဲ့ ရည်းစားဟောင်း Calvin Harris ကြော်ငြာခဲ့တဲ့ ဒေါ်လာ ၁ဝမီလီယံတန် Armani အတွင်းခံတံဆိပ်ဟာ Tom ကို Taylor နဲ့ ရည်းစားဖြစ်သွားလို့ ကမ်းလှမ်းချက်ကို ပြန်ရုတ်သိမ်းသွားပြန်ပါပြီ။
၃)'I heart T.S' ဆိုတဲ့ တီရှပ်ကို အထူးထုတ်လုပ်တဲ့ အတွက် ပေါင် ၂၀ ကုန်သွားပြန်ပါပြီ။ ပေါင်၂၀ က အရမ်းများတဲ့ ပမာဏမဟုတ်ပေမဲ့ မြန်မာငွေနဲ့ တွက်ရင် ၃သောင်းလောက်ရှိမဲ့ အတွက် မနည်းဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။
၄)Tom ရဲ့ အမေကို Taylor Swift သွားတွေ့ဖို့အတွက် ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်နဲ့သွားတဲ့ အခါမှာလဲ ပေါင် ၇,၅၀၀ ထပ်ကုန်ပြန်ပါတယ်။
၅)Taylor နဲ့ အတူညစာ စားတဲ့ ဆိုင်မှာလဲ ဒေါ်လာ ၁၅၀ ကုန်ပါသေးတယ်။
၆)ရောမမှာ Coliseum ကိုကြည့်ဖို့အတွက်လဲ လက်မှတ် ၂စောင် ပေါင်း ဒေါ်လာ ၂၄ ကျပ်ကိုလဲရှင်းခဲ့ပါသေးတယ်။
၇)သြစတေးသျ မှာ ဝိုင်သောက်ဖို့လဲ ဒေါ်လာ၁၀၀ ကုန်ကျခဲ့ပြန်ပါသည်။
စုစုပေါင်း တွက်ရမယ်ဆိုရင် ၄၀ မီလီယံ မက Tom ရဲ့ အိတ်ထဲက နေထွက်သွားပါပြီ။ ဒါတောင် သူတို့နှစ်ယောက် ပရိသတ်တွေကို ချပြတဲ့ဟာပဲ တွက်ထားတာနော်။ နှစ်ယောက်တည်း တိတ်တဆိတ်သွားတဲ့နေရာတွေရှိပါသေးတယ်။ ရည်းစားတွဲတောင်အဲ့လောက်တောင်ကုန်မယ်ဆိုရင်တော့ လူပျိုကြီးလုပ်တာက ပိုသက်သာအုံးမယ်။
Page generated in 0.1444 seconds with5database query and6memcached query.